Hagaha Bilowga ah ee Xayeysiiska Google & Dib-u- suuqgeyntiisa Facebook | BehMaster
Bogga ugu weyn/Warbaahinta bulshada/Tilmaanta Bilowga ah ee Xayeysiiska Google & Dib-u- suuq-geynta Facebook
Dib u suuqgeyn, adoo isticmaalaya Google Ads iyo Facebook, waa hab fiican oo lagu soo celceliyo sumaddaada hortooda kubbadaha indhaha ee xiisaha leh oo aad ka dhigto habkaaga istaraatiijiyadeed ee khadka tooska ah.
Waa fursad labaad oo lagu xayaysiiyo, fursad wax lagu kala gato, ama fursad lagu kobciyo dhagaystayaashaada dadaalkaaga suuqgeynta.
Si ka duwan, haddii loo baahdo, dib-u- suuqgeyntu waa hab lagaga saarayo bartilmaameedka dhagaystayaasha oo lagu haysto doollar xayaysiis indho cusub oo keliya.
Google waxa uu bilaabay in uu dib u suuq gayn ku sameeyo xayaysiisyada bandhiga ilaa 2010. Kadibna dib u suuqgeyntu waxa ay ka soo muuqatay xayaysiis raadinta 2013. Facebook waxa uu bilaabay dhagaystayaal caado u ah 2012, oo ah nooca dib u suuq gaynta.
Waxaa la yaab leh, in kastoo, aan arko kaliya dhowr macaamiil oo cusub kuwaas oo si buuxda uga faa'iideysanaya dib u suuqgeyn - ama xitaa yaqaan waxa ay tahay.
Waa maxay dib u suuqgeyntu?
Dib u suuqgeyn, oo sidoo kale loo yaqaan dib-u-taraynta, waa nooc xayaysiis khadka ah oo tusinaya xayeysiisyada dadka soo booqday mareegahaaga, ama shabakad gaar ah, oo laga yaabo inay soo bandhigeen dabeecad gaar ah (tusaale, aan loo beddelin hadaf beddelka goobta).
Markaa, aynu nidhaahno waxaad ka daawanaysay badeecad Amazon laakiin ma aadan iibsan. Markaad tagto degel kale oo adeegsada xayaysiisyada bandhiga (ama Facebook), Amazon waxay isticmaali kartaa dib u suuqgeyn si ay kuu tusto xayaysiis ka muuqda isla badeecada aadan soo iibsan, taasoo ku nuujinaysa inaad wax iibsato.
Laakin waxa kale oo aad isticmaali kartaa dib u suuqgeyn si aad u abuurto dhagaystayaal addoo isticmaalaya ciwaannada iimaylka ee aad ka soo ururisay macaamiishaada hadda ama jiilka rasaasta.
Taasi waa nooca fudud.
Haddaba aan yara muquuno.
Sidee dib u suuqgeyntu u shaqeysaa?
Mar kasta oo aad hesho booqde cusub, goobtaadu waxay soo ridaysaa buskudka browserka oo aan la garanayn.
Hadda, marka ay soo booqdaan goob kale, adeeg bixiyahaaga dib u suuqgeyntu wuxuu ogaan doonaa goorta laga keenayo xayeysiis boggaaga.
Waa maxay sababta aad u isticmaali karto dib u suuqgeyn?
Quruxda dib u suuqgeyntu waa in bartilmaameedyada dhagaystayaashu ay yihiin waxa aan jeclahay in aan ugu yeero dhagaystayaal "tixgelinaya". Way garanayaan qofka aad tahay.
Dib u suuqgeyntu waxay kuu ogolaanaysaa inaad farsamayso istiraatijiyad dhijitaal ah halkaas oo sumaddaadu had iyo jeer hor istaagto isticmaalayaashan mareegaha gaarka ah marka ay:
Booqo mareegaha meesha xayeysiisyada bandhiga laga heli karo.
Ku samee raadinta ereyga muhiimka ah mashiinka raadinta.
Daawo muuqaal YouTube ah.
Isticmaal shabakada bulshada (tusaale, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest).
Laga soo bilaabo waayo-aragnimada shakhsi ahaaneed, dib-u- suuq-geyntu waxay had iyo jeer fulisay si ka wanaagsan bartilmaameedka guud.
Waxaan ku noolnahay waqti qof walba uu mashquul yahay oo si fudud loo mashquulinayo. Markaa dib u suuqgeyntu waa hab fiican oo aad ku ilaalin karto sumaddaada horteeda iyo xarunta maskaxda macaamiishaada iyo macaamiisha mustaqbalka.
Sida Looga Bilaabo Dib U Suuqgeynta Google Ads & Facebook
Goobaha aan soo sheegnay ayaa aad u fududeeyay dadaalkaaga suuqgeynta.
Aan eegno sida aad uga bilaabi karto dhowr goobood oo caan ah.
In kasta oo aynaan eegi doonin samaynta dhammaan goobaha dib-u-suuq-geynta iyo dib-u-habaynta la heli karo, dhawr tusaale oo geeddi-socod oo hoose ayaa ku siin doona faham guud oo ku saabsan fududaynta awood-siinta dhagaystayaashan.
Raadi & Bandhig Tusaale: Google Ads
Dib u suuqgeynta Booqdaha Mareegta
Maskaxda ku hay in aad ka soo saarayso dhagaystayaasha Google Analytics laakiin aad ku daabulayso Google Ads.
Fahamkan, marka hore hubi inaad ku xidhay koontadaada Xayeysiiska Google iyo koontadaada Google Analytics.
Laga soo bilaabo maamulaha Google Analytics, gudaha goobaha hantida, ka samee dhageystayaal si loo beegsado.
Waxaad dooran kartaa inaad abuurto dhagaystayaal hore loo sii qeexay, liis gaar ah oo ku salaysan dhaqamo gaar ah, ama List Smart.
Liisaska Wacan ayaa ku habboon mareegahaas leh 10,000 oo bog-views maalintii ama in ka badan 500 xawaalad bishii. Kani waa caawinta barashada mashiinka Google kaas oo soo saara dhagaystayaal ku salaysan cidda ay dareemayaan inay u badan tahay inay beddelaan mustaqbalka.
Haddii aadan codsan tirooyinka kore waxaad weli awood u yeelan kartaa Smart Lists laakiin waxaa lagu go'aamin doonaa dabeecadaha goobaha la midka ah.
Inta badan xayaysiiyayaasha dhijitaalka ah, dhagaystayaal caado u ah dabeecadaha la beegsaday ayaa ah habka loo maro. Tusaalaha hoose waxaa loogu talagalay Dhammaan isticmaalayaasha marka laga reebo kuwa gaaray macaamil ganacsi bogga mahadsanid.
Waxaad markaa awoodi doontaa inaad doorato muddada xubinnimada, inta ay tahay daaqadda lagu hayo qof ka mid ah dhagaystayaasha iyadoo lagu saleynayo markay booqdeen goobta. Waxaad dooran kartaa ilaa 540 maalmood laakiin waxay u badan tahay inaad rabto inaad daaqadan ku sii dhawaato inta u dhaxaysa 30-90 maalmood.
Marka xigta, magaca dhagaystayaashaada oo dhagsii sanduuqa si aad isugu xidho Google Ads oo aad kala badh u jirto.
Xayeysiiska Google-ka, ee ku jira Tools tab navigation-ka ugu weyn, booqo qaybta maamulaha dhagaystayaasha.
Liiska ku yaal bogga soo socda waxaad ku aqoonsan doontaa dhagaystayaashaagii hore loo abuuray. Guji sanduuqa ku xiga dhagaystayaashaada oo ogow inaad awood u yeelan doonto inaad ku darto dhagaystayaashan ololeyaasha la doonayo ama kooxaha xayaysiisyada.
Dib u suuqgeyntii dhagaystayaasha
Xayeysiiska Google-ka, dib-u- suuq-geyntu waxa si wacan loogu yaqaanaa Isku-dheellitirka Macmiilka. Mahadsanid, tani sidoo kale waa hab fudud marka la barbar dhigo dejinta dib-u- suuq-gaynta dhagaystayaasha.
Laga soo bilaabo isla goobta maamulaha dhagaystayaasha ee aan ku booqanay Google Ads, dhagsii pluska ka dibna dooro Liiska macaamiisha.
Marka xigta, waxaad haysataa fursad aad ku dhejiso CSV-gaaga xogta macmiilka/hoggaanka ku salaysan iimaylka, telifoonka, magaca, waddanka, ZIP, oo aad doorato inaad geliso xogta xashiishka ah ama aan la xaday.
Hadda waxaad codsan kartaa liiska macaamiishaada ololaha ama kooxaha xayeysiiska.
Hooray! Dhammaantiin waxaad ku xidhan tihiin Google Ads.
Ka dib marka aad dejiso oo aad maamusho ololeyaal guulaysta, waxaad ku qaadan kartaa heer sare oo leh wax-soo-saarka horumarsan sida dib-u- suuqgeyn firfircoon, haddii ay khusayso ganacsigaaga ama ujeedada xayaysiisyada.
Baraha Bulshada Tusaale: Facebook
Si la mid ah sida aan ugu suurtagelinay dib-u-suuqgeynta Raadinta iyo Bandhigga Xayeysiiska Google, waxaanu hindisahayaga ka dhisi doonnaa laba qodob, mareegaha iyo sidoo kale madal Xayeysiisyada Facebook.
Marka hore, u samee pixel Facebook mareegahaaga. Tan samee adigoo booqanaya qaybta Maareeyaha Dhacdooyinka ee Maareeyaha Ganacsiga Facebook. Dooro inaad abuurto ilo xogeed kale.
Laga bilaabo halkan, waxaa lagugu soo jeedin doonaa inaad gacanta ku dhejiso koodka ama aad sidaas ku samayso Google Tag Manager. Waxaan aad ugu talinayaa in la sameeyo tan dambe.
Markaad geyso pixel kaaga waa inaad bilowdaa inaad aragto dhaqdhaqaaqa.
Hadda oo Facebook ay arki karto isticmaalayaasha boggaaga, waa inaan abuurnaa dhageystayaal gaar ah si aan u bartilmaameedsano xayeysiiska Facebook-ga.
Laga soo bilaabo Maktabadda Hantida, waxaan dooran karnaa inaan abuurno dhageystayaal cusub oo ku saleysan taraafikada mareegaha.
Hadda, waxaad abuuri kartaa dhagaystayaal ku salaysan kuwa soo booqday goobtaada, ama kuwa booqday ama aan booqan qaybaha goobta qaarkood.
Waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad doorato daaqada wakhtiga ilaa 180 maalmood markaad ururinayso kooxda dhagaystayaasha.
Tusaalaha kore wuxuu muujinayaa isu imaatinka dhammaan taraafikada goobta laakiin kaliya kuwa aan gaarin beddelka bogga mahadsanid. Hadda, waxaad diyaar u tahay inaad ku dabaqdo dhagaystayaashan ololaha xayaysiiska ee aad beegsanayso.
Haddii aad ogaato in dib u suuqgeyntu si fiican kuugu shaqaynayso, waxaad qori kartaa dhagaystayaal u eg. Kuwaas waxa lagu doortaa 1 boqolkiiba ilaa 10 boqolkiiba dadka wadankaaga la beegsanayo ee loo arko inay la mid yihiin dhagaystayaashaada.
Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale sii kordhin kartaa bartilmaameedkaaga iyo falanqaynta iyada oo loo marayo beddelaadyo caado ah.
Fikradayda, Facebook ayaa muddo dheer tan iyo markii uu ahaa hogaamiye ballaadhka xayaysiisyada bulshada ee la heli karo ee lagu beegsanayo kartida.
Markaad dejiso dib u suuqgeyn guud, waxaad sahmin kartaa fursadaha laga heli karo raadinta dhageystayaasha offline (tusaale, booqashooyinka dukaanka, wicitaanada taleefanka, iwm.).
Waxa kale oo xusid mudan, in dejinta tusaalaha kor ku xusan ay la mid noqon doonto dib-u- suuq-geynta shabakadaha kale ee caanka ah (tusaale, LinkedIn, Twitter).
Nidaamkani wuxuu u baahan doonaa inaan mar kale ku laabanno Maktabadda Hantida, gaar ahaan gudaha tabka Dhagaystayaasha.
Waxaad dooran doontaa inaad abuurto dhagaystayaal sidii aan hore u samaynay laakiin markan waxaad dooran doontaa Faylka Macmiilka. Halkan, waxaad ka soo rarsan kartaa faylkaaga .txt ama CSV si la mid ah sidii aan ku samaynay raadinta iyo habaynta bandhigayada.
Guud ahaan, xogta badan ee aad bixin karto, ayaa sida ugu wanagsan ee awoodda isbarbardhigga ah ay ku jiri doontaa dhagaystayaashaada.
Mar labaad, habkani waxa uu la mid noqon doonaa aaladaha kale ee warbaahinta bulshada.
Isticmaalka Istaraatiijiga ah
Waxaad samaysay habaynta, hadda xiisaha dhabta ah ayaa bilaabmaya. Sida aad uga faa'iidaysato xeeladahaaga suuq-geyneed waxay ku xidhan tahay baahidaada ganacsi.
Wacyigelinta Mawduuca & Horumarinta
Dib u suuqgeyntii dhagaystayaasha bulsheed ee daawaday waxa ku jira baloogga/ ilaha wakhti hore.
Dib u suuqgeyn loogu sameeyo macaamiisha hadda jirta si loo siiyo qiimo dheeri ah agabka kheyraadka.
Abuur dhegeystayaal daawaday macluumaadkaagii hore ee fiidyaha ee mustaqbalka xayaysiisyada InStream YouTube.
Dib u suuq gaynta dhamaan isticmaalayaasha goobta ee soo galay goobta balse aan dhamaystirin iibsi
Dib u suuqgeyn siinta dhammaan macaamiisha hadda jirta si loogu wargaliyo badeecadaha cusub ama fursadaha iibinta isdhaafsiga ah.
Raadi oo tus dib u suuqgeyn gaar ah kuwa isticmaalay kanaalada caanka ah ee bulsheed ee taariikh ahaan lahaa xiriir omni-channel taasoo horseedaysa yoolalka beddelka.
Dadaallada dib-u- suuq-geyneed ee diiradda lagu saaray waddooyin taraafikada hore oo gaar ah iyo xayaysiimaha xagga shabakadaha warbaahinta bulshada ee gaarka ah ama raadinta/muujinta si loo fahmo cilaaqaadka kanaalka omni-ka ee suurtogalka ah.
Beegsiga xayaysiisyada kuwii hore u isticmaalay app kaaga.
Dib u suuqgeyn loogu sameeyo kuwa goobta ka yimid fariimo suuqgeyneed hore/ololeyaal ka yimid matoorada raadinta iyo warbaahinta bulshada labadaba.
Ka saar booqdeyaashii hore ee xayaysiinta daawadayaasha si ay kaaga caawiyaan hubinta inaad gaareyso indho cusub oo kaliya haddii olole cusub ama olole wacyigelin bulsho uu socdo.
Inkastoo aan daboolay oo kaliya dhowr shabakadood oo fursad ah oo loogu talagalay dejinta iyo sidoo kale dhowr tusaale oo adeegsi ah, waxaan rajeyneynaa inaad ka heli karto tiro badan oo kala duwanaansho ah oo ka soo jeeda tusaalahan si ay gacan uga geysato dib u celinta taraafikada tayada leh ee boggaaga.
Ii soo wac "geek xayeysiis," laakiin waan jeclahay alaabtan! Aad bay u fududahay in la geeyo oo waxay horseedi kartaa ROI iyo xeeladaha xayaysiisyada dhijitaalka ah ee caadiga ah.
Waxaan dareemayaa in aad looga faa'iidaysanay oo aan qofna ka bixin fursadda labaad ee suuq-geynta.
6 Khaladaadka Ololaha Dib-u- suuq-gaynta waa inaad ka fogaataa
5 Siyaabood oo Fudud oo aad ku Horumarin karto Ololahaaga PPC ee Dhagaystayaasha
PPC 101: Hagaha Dhamaystiran ee Aasaaska Suuqgeynta Lacag-La-guji
Sawirka sifaysan: Istockphoto.com, waxaa wax ka beddelay qoraaga
Sawirada uu qaaday qoraaga, Janaayo 2019
Dib u eegista DropshipMe - Isticmaal si aad ugu darto Alaabta AliExpress ee la soo saaray WooCommerce
7 Dariiqo oo Wacan oo lagu Wado Beddelka Baraha Bulshada
12 ka mid ah Qalabka Facebook ugu Wanaagsan ee Kobcinta Ganacsigaaga